Sida Dugsiyada Looga Xusho Barta | Boston School Finder
MIYAAD XULANAYSAA DUGSI? WAAN KUCAAWIN KARNAA.
Waxaan aqoonsanahay in qoysasku ay kuxushaan dugsiyada qaabab kaladuwan, qoysaska oo dhan ay muhiimada saaraan waxyaabo kaladuwan. Tusmadaan macluumaadka ah waxay diirada saaraysaa inay qoysaska kataageerto ayadoo siinaysa dookhyo kooban si ay uhelaan dugsiyo si xoogan utaageeraaya qoysaskooda. Tusmadaan waxaa loogu talagalay in looga caawiyo qoysaska inay fiiriyaan dookhyadooda dugsiga ee Boston.
Barta Boston School Finder waxay diyaar utahay si looga caawiyo qoysaska helitaanka macluumaad laxariira dhamaan dugsiyada Boston.
Talaabooyinka lagu talinaayo:
Booqo oo Macluumaad kaqaado Dugsiyada. Magaalada Boston waxay leedahay dookho kaladuwan oo dugsiyo ah oo ay heli karaan qosasku, laakiin majiro hal codsi oo aad kucodsan karto dhamaan dugsiyada iskumar. Waxaan kugula talinaynaa inaad udoorto dugsiyada soosocda cunugaaga:
Boston Public Schools (BPS). Waxaan kula talinaynaa dhamaan qoysaska inay fiiriyaan dookhayada BPS, kuwaasoo ah dugsiyo dawladeed oo bilaash ah.
Booqo DiscoverBPS si aad u aragto nooca dugsiyada BPS ee cunugaagu uqalmo, adoo karaacaaya ciwaanka gurigaaga iyo macluumaadka kale.
Go'aanso dugsiga ay tahay inaad booqato (xiliyada booqashadu waa Nufembar, Diseembar, iyo Janaayo). Booqo barta BPS School Preview si aad u aragto xiliyada horudhaca ee dugsiyada.
Boston Charter Schools. Waxaan kula talinaynaa dhamaan qoysaska inay fiiriyaan dookhayada dugsiada charter-ka ah, kuwaasoo ah dugsio dawladeed oo bilaash ah. Waxaad markasta codsan kartaa hanaanka bakhtiya nasiibka ah kadibna waad iskadiidi kartaa haddii aysan ahayn dookhaad rabtay.
Waxaad sidoo kale iskaqori kartaa waraaqdeena wararka si laguugusoo diro emailka xiliyada dugsiyadu horudhaca samaynayaan.
Booqo barta Boston Public Charter Schools ee codsiga si aad ucodsato dugsiyada Boston Charter Schools.
Taariikhda kama danbaysta u ah codsiyada dhamaan dugsiyada Boston Charter Schools waa feebaraayo 28, 2019.
Dugsiyada madaxa banaan. Haddii aad doonayso aadna awoodo dhiibista qarashka waxbarashada ee cunugaaga, waxaa jiro Dugsiyada Diimaha iyo Kuwa Madaxa Banaan oo kuyaala Boston. Qaar badan oo kamid ah ayaa baxsha caawimaad dhaqaale. Waxaad baari kartaa dugsiyadaan iyo hanaanadooda codsiga ee gaarka ah adoo adeegsanaaya:
BartaAISNE (Independent schools)
Xiliyada lagalo: Janaayo/Feebaraayo/Maarso
Macluumaadka dulmarka. Dib u eegis kusamee macluumaadka dugsiyada kuwaasoo muhiimada ugu badan uleh adigga iyo qoyskaaga. Tan waxaa kamid noqon kara inaad dugsiyo gaar ah kubaarto barnaamijyadooda gaarka ah ama fiirinta macluumaadka koox gaar ah (macluumaadka koox hoosaad waa macluumaadka kusaabsan koox arday ah oo wadaaga xaalado gaar ah sida aqoonsiga isirka ama qoomiyada, heerkooda dhaqan dhaqaale, naafonimada dhanka jirka ama waxbarashada, awoodahooda luuqada, ama arimaha gaarka ah ee aqoonsiga dugsiga tusaale, ardayda waxbarashada gaarka ah). Waxaad kahelaysaa macluumaadka dugsiyada barta Boston School Finder, adoo kubaaraaya dugsiga.
Dookhyada codsiga ama iskaqorista dugsiyada. Xasuusnoow: waxaa jiro dookhyo kaladuwan oo dugsiyo ah oo ay heli karaan qosasku, laakiin majiro hal codsi ood kucodsan karto dhamaan dugsiyada iskumar. Qoysasku waxay codsan karaan tiro kaladuwan oo dookhyo ah, codsiyada dugsiyo badan oo kaladuwan wax saamayn ah kuma yeelanayso fursadaha aad uga qaybgali karto nooc kale oo kasta oo dugsi.
Isticmaal Tusmadeena Sida Loo codsado si aad ucodsato ama aad iskaqorto dugsi, ama booqo Boston School Finder.
Fasalada K0, K1, 6aad, 7aad, 9aad: Janaayo 3 - Feebaraayo 1
Waalidiintu waa inay kaqoraan caruurtooda fasaladaan. Qoysaska waxaa loosoo sheegayaa dugsiga loodooray bisha Maarso 29.
Fasalka K2 iyo dhamaan fasalada kale: Feebaraayo 11 - Maarso 22
Waalidiintu waa inay kaqoraan caruurtooda fasalka K2. Qoysaska waxaa loosoo sheegayaa dugsiga loodooray bisha Maarso 29.
Dhamaan fasalada: Feebaraayo 28
Kaqor ardaygaaga bakhtiya nasiibka dugsiga Charter-ka Feebaraayo 28. Waalidiinta waxaa loosoo sheegayaa aqbalaada dugsiga/liisaska sugayaasha bisha Maarso.
Dhamaan dugsiyada lacagta ah waxay maraan hanaankooda ugaarka ah. Kafiiri bagooda dugsiga ee ay kueelyihiin barta Boston School Finder ama bartooda dugsiga ee gaarka ah si aad macluumaad dheeri ah uga hesho xiliyada muhiimka ah.
Isqor. Marka dookhyada dugsiyadu diyaar noqdaan, kadooro dugsi dookhada aad heshay!